Ukulungisa iitattoos kunye nentsingiselo yazo | Ukuzoba
Iitattoo zinyembezi kunye nentsingiselo yazo
UAntonio Fdez | | Iitatto ezinemilo, Izinto kunye neeTattoos zezinto
Nangona singayi kungena kwiinkcukacha malunga nobudlelwane ilizwe leetatto elizigcinileyo ukusuka kwimvelaphi yalo nehlabathi lolwaphulo-mthetho kunye "nobomi obubi", kuyacaca ukuba namhlanje le nto sele iyinto yakudala kwaye kule mihla ithwele enye okanye ii-tattoos ezingakumbi azifani nokuba ngumntu ombi. Ngelishwa Ukufikelela kwimeko yokuba abantu abaninzi baqhubeke benolu luvo malunga nobugcisa bokubhala, kukho ezinye iintlobo zeetato ezichaphazele ngqo. Umzekelo, ndibhekisa kwiitattoos ezinxulunyaniswa namabanjwa.
Kwaye yile, njengoko sisazi kakuhle kwaye siphawule ngamanye amaxesha kwi Ukuzoba, ngokokuyiphi na imimandla yehlabathi, ngaphakathi kweentolongo kukho isigama esiqinisekileyo kunye nendlela yonxibelelwano ngokusebenzisa iitatoo. Kuxhomekeka kumvambo onawo kunye nendawo akuyo emzimbeni, uya kuthumela umyalezo kwamanye amabanjwa. Ngaphandle koku, kwaye njengoko nditshilo, ayiloxesha lokuthetha ngalo, nangona siza kunyanga uhlobo olubucayi kakhulu lwe tattoo.
Ndiyathetha Iitattoo zinyembezi kunye nentsingiselo yazo. Ziyilwe ngokomfuziselo kwaye, ukuba zenziwe kwindawo yazo yendalo, oko kukuthi, kanye phantsi kweliso, isigqibo kufuneka siqwalaselwe ngononophelo. Akufuneki ithathwe kancinci kuba yeyona tattoo ikhethekileyo enokukhokelela kwiimpazamo kwaye ikuzisele ingxaki engaphezulu kwesinye, nangona kungafanelekanga ukuba ibenjalo.
Njengoko besitshilo, Iitattoos zeenyembezi yenye yezo tattoos ezinxulunyaniswe nemeko yasentolongweni kwaye ziyilungu lemigulukudu yolwaphulo mthetho. Iitattoo zeenyembezi zihlala zi tattoo kwikona yamehlo okanye esidleleni uqobo ngaphantsi kwaso. Ngokwesiqhelo babonisa ixesha lomntu alichitha entolongweni. Nangona kunjalo, bahlala beyitattoo ukukhumbula ukuba sidlule kwixesha elibuhlungu nelibuhlungu ebomini bethu.
Kwelinye icala, iitattoo zeenyembeziKuxhomekeke kwinani leenyembezi ezinombhalo, banokubonisa inani labantu ababuleweyo libanjwa.
Iifoto zeTattoos zeinyembezi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Iitattoo zinyembezi kunye nentsingiselo yazo
Intsingiselo yomvambo woboya, uphawu lwamandla
Iitattoos zeenwele, ii-coiffeurs kunye nee-stylists